Izindaba - Uyafuna ukufaka i-RFID microchips RFID Tag esilwaneni sakho?
Ingabe ufuna ukujova i-RFID microchips RFID Tag esilwaneni sakho?
Muva nje, i-Japan ikhiphe imithethonqubo: kusukela ngoJuni 2022, izitolo zezilwane kufanele zifake ama-microelectronic chips ezilwane ezifuywayo ezithengiswayo. Ngaphambilini, iJapane yayidinga amakati nezinja ezivela kwamanye amazwe ukuze zisebenzise ama-microchips. Ekuqaleni kuka-Okthoba odlule, i-Shenzhen, e-China, yasebenzisa “Imithetho Ye-Shenzhen Yokufakwa Kwethegi Yezinja Kagesi (Isivivinyo)”, futhi zonke izinja ezingenawo ama-chip implants zizobhekwa njengezinja ezingenalayisense. Kusukela ekupheleni konyaka odlule, i-Shenzhen izuze ukusabalala okugcwele kokuphathwa kwe-dog rfid chip.
Umlando wohlelo lokusebenza kanye nesimo samanje se-pet material chips. Eqinisweni, ukusetshenziswa kwama-microchips ezilwaneni akuvamile. Ukufuywa kwezilwane kukusebenzisa ukurekhoda ulwazi lwezilwane. Izazi zezilwane zitshala ama-microchip ezilwaneni zasendle njengezinhlanzi nezinyoni ngezinhloso zesayensi. Ucwaningo, nokulufaka ezilwaneni ezifuywayo kungavimbela izilwane ezifuywayo ukuthi zingalahleki. Njengamanje, amazwe emhlabeni jikelele anezindinganiso ezihlukene zokusetshenziswa kwe-RFID pet microchips tag: I-France yabeka ngo-1999 ukuthi izinja ezingaphezu kwezinyanga ezine ubudala kufanele zijovwe ngama-microchips, futhi ngo-2019, ukusetshenziswa kwama-microchips kumakati nakho kuyimpoqo; I-New Zealand yayidinga ukuthi izinja ezifuywayo zitshalwe ngo-2006. Ngo-April 2016, i-United Kingdom yadinga ukuthi zonke izinja zifakwe ama-microchips; I-Chile yasebenzisa uMthetho Wesikweletu Sobunikazi Bezilwane ngo-2019, futhi cishe isigidi samakati nezinja ezifuywayo zafakwa ama-microchips.
Ubuchwepheshe be-RFID obulingana nezinhlamvu zelayisi
I-rfid pet chip ayilona uhlobo lwezinto ezibukhali njengeshidi abantu abaningi abazicabangayo (njengoba kukhonjisiwe kuMfanekiso 1), kodwa umumo oyisilinda ofana nerayisi lezinhlamvu ezinde, ezingaba zincane zibe ngu-2 mm ububanzi futhi zibe ngu-10. mm ubude (njengoba kukhonjisiwe kuMfanekiso 2). . Le chip encane “yezinhlamvu zelayisi” imaki esebenzisa i-RFID (I-Radio Frequency Identification Technology), futhi ulwazi olungaphakathi lungafundwa “ngomfundi” othile (Umfanekiso 3).
Ngokukhethekile, lapho i-chip itshalwa, ikhodi ye-ID equkethwe kuyo kanye nolwazi lukamazisi womfuyi luzoboshwa futhi lugcinwe kusizindalwazi sesibhedlela sezilwane ezifuywayo noma inhlangano yokuhlenga. Lapho umfundi esetshenziswa ukuzwa isilwane esiphethe chip, sifunde Idivayisi izothola ikhodi ye-ID bese ifaka ikhodi kusizindalwazi ukuze yazi umnikazi ohambisanayo.
Kusenendawo enkulu yokuthuthukiswa emakethe yezilwane ezifuywayo
Ngokusho kwe-“Pet Industry White Paper” ka-2020, isibalo sezinja ezifuywayo kanye namakati afuywayo ezindaweni zasemadolobheni aseChina sidlule ezigidini eziyi-100 ngonyaka odlule, safinyelela ezigidini eziyi-10.84. Ngokukhula okuqhubekayo kweholo lomuntu ngamunye nokwanda kwezidingo ezingokomzwelo zentsha, kulinganiselwa ukuthi ngo-2024, iChina izobe isinamakati nezinja ezifuywayo eziyizigidi ezingu-248.
Inkampani ebonisana nezimakethe iFrost & Sullivan ibike ukuthi ngonyaka ka-2019, bekunamathegi ezilwane e-RFID ayizigidi ezingama-50, kuwo ayizigidi eziyi-15. I-RFID ingilazi tube tags, Amandandatho ezinyawo zamajuba ayizigidi ezi-3, kanti amanye ama-ear tag. Ngo-2019, isikali semakethe yethegi yezilwane ye-RFID sesifinyelele kuma-yuan ayizigidi ezingama-207.1, okubalelwa ku-10.9% wemakethe ye-RFID esezingeni eliphansi.
Ukutshala ama-microchips ezilwaneni ezifuywayo akubuhlungu futhi akubizi
Indlela yokufakelwa i-microchip yesilwane iwumjovo ongaphansi kwesikhumba, ngokuvamile emhlane ongaphezulu wentamo, lapho izinzwa ezibuhlungu zingathuthukisiwe, akukho i-anesthesia edingekayo, futhi amakati nezinja ngeke kube buhlungu kakhulu. Eqinisweni, abanikazi bezilwane ezifuywayo abaningi bazokhetha ukuvala amagciwane ezifuywayo. Jova i-chip esilwaneni ngesikhathi esifanayo, ngakho isilwane ngeke sizwe lutho enalitini.
Enkambweni yokufakelwa kwe-chip chip, nakuba inaliti yesirinji inkulu kakhulu, inqubo ye-siliconization ihlobene nemikhiqizo yezokwelapha kanye nezempilo kanye nemikhiqizo yaselabhorethri, enganciphisa ukumelana nokwenza imijovo ibe lula. Eqinisweni, imiphumela emibi yokufaka ama-microchips ezilwaneni ezifuywayo ingase ibe ukopha kwesikhashana nokulahlekelwa izinwele.
Njengamanje, imali yokufakelwa i-microchip yezilwane zasekhaya ingaphakathi kwama-yuan angama-200. Ukuphila kwenkonzo bude beminyaka engu-20, okusho ukuthi, ngaphansi kwezimo ezijwayelekile, isilwane esifuywayo sidinga kuphela ukutshala i-chip kanye ekuphileni kwaso.
Ngaphezu kwalokho, i-microchip yesilwane ayinawo umsebenzi wokumisa, kodwa idlala indima kuphela ekurekhodweni kolwazi, okungase kwandise amathuba okuthola ikati noma inja elahlekile. Uma umsebenzi wokuma udingeka, ikhola ye-GPS ingacatshangelwa. Kodwa kungakhathaliseki ukuthi uhamba nekati noma inja, intambo iyintambo yokuphila.
Isikhathi sokuthumela: Jan-06-2022